ဂွါ IBC နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂွါ IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ
တစ်ခုကဂွါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (IBC) တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံကနေအတူတူပင်ကိုသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တရားဝင် entity ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးလိုအပ်မယ့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ IBC အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
1982 ၏ဂွါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအက်ဥပဒေတစ်ရပ် IBC အုပ်ချုပ်။ ဤပညတ်တရားအားလုံးအခွန်အနေဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ရေး, 100% ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ (လျှော့ဂွါ) သည်အရှေ့ကာရစ်ဘီယံတွင်တည်ရှိသည်သေးငယ်တဲ့ကျွန်းများကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်း၏အလယ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအတူခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။
ဂွါ 1632 ကနေလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည့်အခါ 1981 သည်အထိဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်ဒီမိုကရေစီဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သားလွှတ်တော်နှင့်တစ်ဦးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ဧကရာဇ်အင်္ဂလန်ဘုရင်မအဲလိဇဘက်သည်။
တစ်ခုကဂွါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (IBC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• လုံးဝနိုင်ငံခြားရေးရှယ်ယာရှင်များမှာ: အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများနိုင်ပါတယ်။
• အခွန်လွတ်: IBC ရဲ့မည်သည့်မျိုးမျှအခွန်ပေးဆောင်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• လျှို့ဝှက်: မည်သူမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ဦး IBC သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်အဘို့အဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းဘယ်တော့မှနေကြသည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အဆိုပါ IBC ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်ထုတ်ဖော်ဘယ်တော့မှနေကြသည်နှင့်ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်သီးခြားဥပဒေရေးရာခန္ဓာကိုယ်အဖြစ် IBC ကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: တစ်ခုက IBC တနေ့အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ဟာ IBC မှစုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သည်သူကိုလိုအပ်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ပြီးနောက် ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ်နီးပါး 350 နှစ်ဂွါရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
ဂွါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (IBC) အမည်
တိုင်း IBC ဂွါအားလုံးကိုအခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများများ၏အမည်များကနေထူးခြားတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, လှညျ့စားကုမ္ပဏီအမည်များသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောလိုင်စင်မရှိဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဤအမြိုးအစား inferring ရှိသူများအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်: ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာဘဏ်များ, တီ, ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်န်ဆောင်မှုများ, ငွေကြေးရန်ပုံငွေများ, အာမခံ, ငွေချေး, ပင်စင်လစာ, ငွေစု, အာမခံ, စတော့ရှယ်ယာနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်မှု။
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါသာကန့်သတ်သူတို့ဂွါရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်မနိုင်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ခုက IBC အပါအဝင်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများအများအပြားအမျိုးအစားများကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်:
•သင်္ဘောများနှင့်ရွက်လှေများနှင့်အခြားရေယာဉ်များ၏ Antiguan အလံမှတ်ပုံတင်ရေး; နှင့်
•အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Trust မှလှုပ်ရှားမှုများ။
1982 ၏ IBC အက်ဥပဒေကခွင့်ပြုချက်မပါဘဲတစ်ဦး IBC အကြောင်းကိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်တစ်ခု IBC နှင့်ဆက်စပ်မည်သူမဆိုများအတွက်ရာဇဝတ်မှုစေသည်။ ချိုးဖောက်မှုများအဘို့အပြစ်ဒဏ်များထောင်ဒဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေများပါဝင်သည်။
ဂွါကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များမှမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ရန်ဆိုဘဏ်ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ် IBC န်ထမ်းသို့မဟုတ်တွဲဖက်များအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုအောင်အလွန်တင်းကျပ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ဥပဒေများရှိပါတယ်။ အဆိုပါရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဒဏ်ငွေများပါဝင်သည်။
တဦးတည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်အခွင့်ရနေထိုင်သူဥပဒေရေးရာ entity အပါအဝင်နှစ်ဦးကိုဂွါနိုင်ငံသားများမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများလက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦး IBC ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပဋိညာဉ်စာတမ်းတစ်ခုလျှောက်လွှာလည်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး IBC ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှယ်ယာရှင်များမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားများနိုင်ပါတယ် (သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များ) သို့မဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေ (ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ) တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်။
ရှယ်ယာ သာ. ကြီးမြတ် privacy ကိုအဘို့အဆောင်လုလင်, သို့မဟုတ်အမည်ခံအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်နိမ့်ဆုံးအနေနဲ့ IBC ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာ သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်သည်။
တိုင်း IBC ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျမြားနှငျ့မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရဲ့ရုံးဖြစ်ရသောတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
IBC ရဲ့လစာမျှကော်ပိုရိတ်အခွန်မျှဝင်ငွေအခွန်မျှမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်မျှအခွန်ရှောင်အခွန်မျှတံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်, နှင့်မျှမအိမ်ခြံမြေအခွန်။ ထို့အပြင်ရှယ်ယာရှင်များဝင်ငွေအခွန်အခမဲ့ IBC ရဲ့ဝင်ငွေကနေပေးဆောင်ခွဲဝေခံယူနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်ကော်ပိုရိတ် FILE လိုအပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များတင်သွင်းနေကြသည်။
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. နှင့် IBC ရဲ့အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
တစ်ခုက IBC ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်တစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အစိုးရမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာများ၏ဆောင်းပါးများပြင်ဆင်နေအပါအဝင် 24 နာရီအတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ခုကဂွါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (IBC) တွင်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, လျှို့ဝှက်ချက်များ, privacy ကိုမျှအခွန်မြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်, တူညီတဲ့လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တရားဝင် entity ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား။